Global Environmental Institute – စာမျက်နှာ3– GEI
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။
ကျန်းမာသန်စွမ်း၍၊ မတူကွဲပြားသောကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လာရန်ကူညီလိုသည်။
Leading China and the Developing World toaLow-Carbon Future.
Ecosystem Conservation and Community Development Program
Demonstrating that conservation and development can – and should – work together.
Supporting China’s role in global sustainability.
Working forahealthy marine ecosystem withinasustainable world.
Supporting Innovative and Progressive Projects that Solve Environmental Problems.
Bettering, promoting and intensifying GEI project impact.
Read our latest news and insight from our program blogs.
Homeland — Stories from Sanjiangyuan
Beijing, China — What doamedical student, yak herder, tailor, and photographer all have in common? While these occupations may seem worlds apart, they...
On October 22-23, Global Environmental Institute (GEI), the Guangzhou Institute of Energy Research (GIEC) of the Chinese Academy of Sciences, and the Department of Research...
Short Film: Sea Turtle Conservation
The 98-member China Sea Turtle Conservation Alliance (CSTCA), inaugurated in Sanya, China on May 23, 2018, by China’s Fisheries Resource Management Bureau under the...
ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း (GEI; 朝阳： 北京市朝阳区永续全球环境研究所) သည် အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့ တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း သာမကအရှေ့တောင်အာရှနှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်ပါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်ရေးများအတွက်
ဆန်းသစ်သောအဖြေများဖော်ဆောင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍တရုတ်နိုင်ငံ၏အရေးတကြီးဖြစ်သောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်မှ တိုးလာခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်းအရာရှိများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် လျော့ချခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျင်းသောကော်ပိုရိတ်လူမှုရေးတာ၀န်ယူမှု၊ နှင့်အမျိုးသားဂေဟစနစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အစရှိသောကိစ္စများ၏ မူ၀ါဒရေးရာတိုးတက်ရေးများကိုပါ အကြံပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။